Fianakaviana - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Fantatro fa mety tsy misy afaka mandre azy intsony, saingy indrisy Corona dia eo am-bavan'ny tsirairay indray na indray. Indrindra fa akaiky ny Krismasy isika dia mety hiseho ho an'ny maro izany. Ary avy eo dia azonay tamin'ny mpamaky ity lahatsoratra ity izay tianay ny hamoaka tsy miova.
Krismasy amin'ny fotoana "hafahafa"
Mety manontany tena ianao hoe ahoana no tokony hanaovanao izany rehetra izany. Misy ray aman-dreny, raibe sy renibe, nenitoa, dadatoa, zanaka ary mety misy olona tsara kokoa aza izay laninao matetika amin'ny fety. Fa toa tsy ho amin'ity taona ity izany. Azo antoka fa maro ny endrika mampalahelo amin'ity taona ity.
Sary avy amin'ny Christo Anestev amin'ny pixel
Izaho koa nanontany tena hoe ahoana no tokony hatao amin'ity taona ity. Rehefa dinihina tokoa, olona folo isika. Ny zanatsika rehetra dia efa lehibe ary samy manana ny ankohonany, izay tokantrano dimy. Avy eo ao ny rafozambaviko, ny tokantrano fahenina.
Ka tsy maintsy hisy tsy hitovizany amin'ity taona ity. Nandany fotoana lava be izahay nitaintainana ny amin'izay hataonay, na dia eo aza izany fotoan-tsarotra izany dia afaka nanao somary Noely izahay ary tsy mila misaona amin'ny sisa amin'ny taona.
Nahita izao hevitra manaraka izao izahay: "Noely sy Corona" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. Novambra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelona, tokantranoKeywords Advantista, Corona, Covidien, Covid19, family, Fankalazana ny fianakaviana, Noely, Fetin'ny NoelyLeave a Comment ho an'ny Noely sy Corona
Corona, manirery ary andao hanao ny tsara indrindra
Amin'ny tapaky ny volana martsa izao ary nanapa-kevitra ny hanao politika ireo mpanao politika Alemanina. Tsy te hieritreritra aho hoe hitsara raha marina ireo fepetra Corona ireo. Toy izany ny fepetra ary tokony ho hitantsika fa afaka miatrika izany izahay.
Tantara kely momba an'i Corona
Izaho dia olona manandrana manararaotra ny toe-javatra mety indrindra. Ary noho izany, mazava ho azy, nandritra io fotoana io dia nieritreritra momba ny fomba tsara indrindra hiatrehana ireo lalàna ireo koa aho.
Araraoty tsara ny fameperana Corona -
Manan-janaka telo aho, lehibe daholo izy rehetra, tsy ao an-trano intsony izy rehetra, ary samy manana ny tongony roa amin'ny tany avokoa. Izahay dia fianakaviana tia mifankahita, miara-mipetraka, misakafo, milalao, na inona na inona ataon'ny fianakaviana lehibe.
Tampoka teo dia tsy azo natao intsony izany. Tamin'ny voalohany dia tsy dia nampaninona ahy loatra izany satria tsy voatery nifankahita indray mandeha isan-kerinandro na dia tamin'ny fotoana "mahazatra" aza.
Ary farany eo koa ny telefaona sy ny WhatsApp. Saingy rehefa afaka telo na efatra herinandro amin'ny maha reny (reny indray mandeha, reny foana) dia lasa tsy milamina aho ary malahelo ny zanako.
Ka inona no nataoko? "Corona, manirery ary andao hanao ny tsara indrindra" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 7. Oktobra 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Corona, Covidien, Covid19, family, Fanamby, olanaLeave a Comment ho an'i Corona, ny fanirery ary ndao isika hanao ny tsara indrindra